दसैं मनाउन स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ ? घरपरिवारलाई कस्ता सामान कति लैजान पाइन्छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड दसैंको आज चौथो दिन हो । दसैं मनाउन विदेशबाट स्वदेश फर्किरहेका छन् । यद्यपि, यस पटक कोरोना माहामारी छ । सरकारले पनि जो जहाँ छ, त्यहिँ सुरक्षित तरिकाले दसैं मनाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
विदेशबाट फर्केका जुनसुकै नेपाली यात्रुले सात किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार ल्याउँदा भन्सार महसुल लाग्दैन । यस्तै एक लिटरको एक बोतल मदिरामा पनि भन्सार महसुल लाग्दैन ।
सुनको गहना ५० ग्रामसम्म, चाँदीको गहना ५ सय ग्रामसम्म र एक लाख मूल्यसम्मका जवाहिरात जडित सुन तथा चाँदीका गहना, ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्यूटर, घडी, मोबाइल, भिडियो क्यामेरा, पेनड्राइभ एक/एक थान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्दैन ।
शरीर पातलो छ तर पेट भने लगातार फुल्ने समस्या लगभग १० देखि ८ मानिसहरुले भोगिरहेका हुन्छन् । पेट बढ्दा आफूलाई मन पर्ने कपडा लगाउन नपाउने तथा आफैलाई असहज महसुस हुने गर्छ । तर, पेट बढ्ने समस्याको समाधानका लागि घरमा नै केही उपायहरु अपानाउन सकिन्छ । दैनिक ३.५ लिटर पानी पिउनुस् पेट बढेपछि कतिपय मानिसहरु पानी […]